Mogadishu Journal » 2018 » September » 28
Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn ku dilay xubno ka tirsan Al Shabaab
Mjournal :-Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ciidamada Kumaandooska Mareykanka oo kaashanaya ciidanka Soomaalida ayaa waxa ay duqeyn ka fuliyeen degaano ku yaalla dhanka Koonfureed ee magaalada Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay taliska Mareykanka Afrika ee AFRICOM ayaa...
Mjournal :-Madaxweynihii hore ee DDSI Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka dalbaday Ra;iisul Wasaaraha Itoobiya inuu cafis u fidiyo, isaga iyo dadka la eedeysan. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hadalkan jeediyay Maxkamad ku taalla Addis Ababa oo markii 3aad la horkeenay. Waxaa uu ka codsday...
Turkiga oo xarun lagu xanaaneeyo agoonta ka hirgeliyay Muqdisho
Mjouran :-Hay’adda Istanbul-based Humanitarian Relief Foundation (IHH) oo uu fadhigeedu yahay magaalada Istambuul ee dalka Turkiga ayaa soo gaba-gabeysay dhismaha xarun lagu xannaaneeyo agoonta oo laga hir-geliyay magaalada Muqdisho. Xaruntan oo Hoy u noqon doonta 120 carruur ah...
Mjournal :-Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa howl gal qorsheysan oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ay ku soo qabteen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Sida lagu baahiyay barta Twitter-ka ee NISA waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu soo qabtay khabiir dhanka...
Francesco Totti oo weerar afka ah ku qaaday Pavel Nedved
Mjournal :-Halyeeyga Xulka Talyaaniga Francesco Totti ayaa weerar Dhanka Afka ah ku qaaday laacibkii hore ee kooxda Juventus Pavel Nedved. Francesco Totti ayaa Noloshiisa u huray kooxda reer talyaani ee As Roma Maalmihiisii Ciyaarta Kubadda Cagta. Kabtankii hore ee kooxda Roma...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa soo xiray shir lagaga hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa dabar goynta xanuunada faafa ee degaanada xuduudka ay wadaagan Kenya iyo Soomaaliya. Shirkan oo maalmahan ka socday...